Qabashada Shirweynaha Shanaad ee SSUP oo lagu qabanayo Sweden
Juun, 2009 - Iswiidhan
Anigoo ku hadlaya magaca xisbiga midnimada bulshada Somaaliyeed waxaan ogeysiinyaa dhamaan xubanaha xisbiga midnimada bulshada Somaaliyeed oo ku kala sugan dunida dacaladeeda ina la qabanayo shirweynihii sanadguuradii 5th taasoo lagu qaban doono magaalada Katrineholm, ee wadanka Iswiidhan taariikhdu marka ay tahay 4ta - 5ta Luulyo, 2009.
Sidoo kale, waxaan halkan ku cadaynayaa mowduucyada looga hadli doono shirweynaha sanad guurada shanaad ee SSUP, mowduucyadaas oo kala ah:-
Dib u eegis qorshe howleedka SSUP iyo waxa u qabsoomay.
Xaaladaha biniaadanimo & dagaalada siyaasad-diimeedka ee ka jira Somaaliya.
Nidaamka is-dhexgalka bulshada Somaalida Iswiidhan.
Xalaadaha Somaalida soo galootiga ah ee ku sugan Iswiidhan & waqooyiga yurub.
Xadgudubyada & Dilalka sida ula kaca ah loola beegsanayo wariyayaasha Somaaliyeed
Sida la wada ogsoon yahay, waxaa koonfurta Somaaliya ka soconaya dagaalo siyaasad-diimeed ku saleysan oo si xowli ah u bilowday febraayo 2009 markii uu baarlamaanka federaalka ku meel gaarka uu si aqlabiyad leh u ansixiyay in dalka Somaaliyo lagu dhaqo shareecada islaamka, golaha xukumaduna ay aqbashay balana ay ku qaadeyn inay ka hortageyso cid ala cidii isku dayda inay ka hortimaado fulinta sharaceeda.
Sidoo kale, waxaa iyana kasii dareysa xaaladaha biniaadanimo ee haysata barakacyaasha ku sugan duleedyada caasimada Muqdisho, Jowhar & Beledweyn, dadkaas oo kasoo barakacay degaalada siyaasad-diimeedka ee ka socda koonfurta & bartamaha Somaaliya.
Sida ku cad warbixinta ay soo saartey hay’ada lanqeyrta cas ee caalamiga, in ka badan boqol rayad ah ayaa ku geeriyooday, kumanaana wey ku dhaawacmeen iyo ku dhowaad boqol kun oo u badan waayeel, dumar iyo caruur way ku barakaceen. barakacayashaas oo ku biirey xeryo ay degan yihiin barakacayaal hore uga bara kacay degaaladii caasimada iyo sidoo kale xarumo qaxooti oo aad u buux dhaafsan oo ku yaala xuduudaha wadamaderiska. Inta badan dadka dagaalada kazoo barakacay waxa ay ku sugan yihiin xaalad aad u liidata oo ay ugu daran tahay hoy la’aanta iyo cuna yarida.
Gebagebadii, waxaan si adag ugu dhiirinayaa dhamaan xubnaha SSUP inay ka qeybqaatan shirweynaha shanaad ee xisbiga waqtigana ay dhowraan. Lakiin, xubnaha aan awoodi karin daruufo shaqo & mid nololeed awgeed inay kasoo qeybgalaan shirweynaha xisbiga waxaan ka codsaneynaa inay fikirdahooda qaaliga ah ee ku wajahan horumarinta xisbiga & wax ka qabadka dagaalada siyaasad-diimeedka ee ka socda koonfurta & bartamaha Somaaliya.
Casumaadda Shirka July 2009 halkan ka eeg
Eng. Ahmed M Moalin
Xoghaya Guud ee Xisbiga Midnimada Bulshada Somaaliyeed
info@ssup.se - ahmed.moalin@gmail.com